Izimbo Ezibonisa Ukuba Umntu Ufuna Ukulala Nam—Ndingajongana Njani Nazo | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOssetia IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ziziphi ezi zimbo?
Ndenze ntoni xa umntu esenza izimbo zokufun’ ukulala nam?
Ezi zimbo ziquka nantoni na eyenziwa kuwe ube ungayfuni ngokukodwa xa loo inento yokwenza nokulalana—okuquka ukuphathaphatha okanye ukuthetha ngezinto ezinento yokwenza nesini. Kodwa ngamany’ amaxesha kunzima ukwahlula enoba umntu wenza izimbo zokufuna ukulala nawe okanye uyakugezela okanye uyakuncoma.
Ngaba uyawazi umahluko? Uza kuzifumana apha iimpendulo!
Okubuhlungu kukuba, le nto ayipheli xa usahamba isikolo kuphela kodwa iyaqhubeka nasemva koko. Noko ke, ukuba wakha ubuchule obaneleyo bokujongana nale ngxaki, uza kukwazi ukuyilwa ngokuphumelelayo nasemsebenzini, uze ukhusele nabanye kulo mkhwa!
“Kufuneka uzimele. Abanye abantu abasoze bakuyeke ngaphandle kokuba wenza kucace ukuba umi phi wena ngale nto. Qina uze uthi, ‘Andiyifuni le nto uyenzayo!’ Ukuba naleyo ayincedi nganto, xelela omnye umntu!”
“Sukuzihleka iziqhulo ezingokulalana okanye uthethe ngendlela evuselela inkanuko. Ukuba uyazenza ezo zinto abanye abantu baza kucinga ukuba uthanda amehlo kunye nabantu besini esahlukileyo.”
Ndenze ntoni ukuba ezi zimbo zenziwa kum?
Ukuze unqande umntu owenza izimbo zokufuna ukulala nawe kufuneka kuqala wazi ukuba ziintoni ongathandi zenziwe kuwe kwaye uyazi nento oza kuyenza xa esenza ezo zinto! Khawufunde ngezi meko zintathu nendlela onokumelana ngayo nazo.
“ Emsebenzini kwakukho oobhuti abadala kunam, babesoloko besithi babawela ukuphinda babe ngabafana kwakhona, yaye babesoloko bendixelela ukuba ndimhle. Omnye wabo wada wajikela emva kwam wanukis’ iinwele zam! ”—UTabitha ona-20.
UTabitha wayenokucinga ngolu hlobo: ‘Ukuba ndinokunyamezela, mhlawumbi baza kundiyeka.’
Isizathu sokuba le ndlela yokucinga isenokungasebenzi: Iingcali zithi xa abantu abahlutshwayo bengahoyanga nto, le ngxaki idla ngokuqina.
Zama oku: Uzolile, yenze icace kulowo ukuhluphayo ukuba awuzukuyinyamezela le ayenzayo. UTaryn ona-22 uthi: “ Ukuba kukho umntu ondibamba kwindawo endingafuni kubanjwa kuyo, ndiye ndimxelele ukuba angaze aphinde ayenze loo nto. Oko kudla ngokubothusa abafana. ” Ukuba loo mntu uyaqhubeka, unganikezeli. Xa iBhayibhile ithetha ngendlela efanelekileyo yokuziphatha ithi: ‘ Sukuzoyikisela, khula engqondweni, ungahexi. ’—Kolose 4:12, i-The New Testament in Contemporary Language.
Wenze ntoni xa loo mntu ukuhluphayo ekoyikisa ngokuthi uza kukonzakalisa? Xa kunjalo, sukumphendula. Hamba ngokukhawuleza apho uze ucele uncedo kumntu omdala omthembileyo.
“ “Xa ndandifunda ugrade-6, ndabanjwa ngamantomb’ amabini epasejini. Omnye wabo wayeyilesbian, esithi ufuna ukujola nam. Nangona ndandisala baqhubeka bendihlupha. Ngenye imini bandityhalela bade eludongeni! ”—UVictoria, ona-18.
UVictoria wayenokucinga oku: ‘Ukuba ndiyabaxela, baza kuthi ndiligwala, mhlawumbi akukho kwamntu oza kundikholelwa.’
Isizathu sokuba le ndlela yokucinga isenokungasebenzi: Ukuba akumxeli loo mntu ukuhluphayo, akasoze akuyeke yaye unokude aqalise ukuhlupha nabanye.—INtshumayeli 8:11.
Zama oku: Cela uncedo. Abazali kunye nootitshala bangakunceda uboyise abo loo mntu ukuhluphayo. Kodwa uza kwenza ntoni ukuba abantu oxela kubo abakuhoyi? Zama oku: Qho uhlutshwa ngabantu abanezimbo ezibonisa ukuba bafuna ukulala nawe, bhala phantsi zonke iinkcukacha. Quka umhla, ixesha indawo kunye noko aye wakuthetha. Yenza ikopi uze uyinike umzali okanye utitshala. Abant’ abaninzi bayibona ibaluleke ngakumbi into ebhaliweyo kunethethwa ngomlomo.
“ “Ndandisoyika omnye umfana owayedlala umbhoxo. Wayemde, phantse abe ziimitha ezimbini kwaye enobunzima obuziikhilogram eziyi-135! Wayesele ezixelele ukuba uza kulala nam.’ Wayendihlupha kakhulu, phantse yonk’ imihla—kangangonyaka. Ngenye imini xa sasishiyeke sobabini eklasini wathi xa eqalisa ukusondela ndabaleka ndaphuma ngomnyango. —UJulieta ona-18.
UJulieta wayenokucinga ngolu hlobo: ‘Banjalo kakade abafana.’
Isizathu sokuba loo ndlela yokucinga ibingazi kuba luncedo: Ukuba wonke umntu ucinga ukuba lo mfana wenza nje into eqhelekileyo, akakazukutshintsha.
Zama oku: Sukuhleka okanye uman’ uncuma xa uhlutshwa. Kunoko, bonisa loo mntu ukuba akuzukuyinyamezela le nto ayenzayo.
IBALI LOKWENYANI 1:
“ Andiyithandi into yokuba krwada ebantwini. Naxa abafana beqhubeka bendihlupha, ndandiye ndibaxelele ukuba bayeke—kodwa nam ndandingaqini, kwaye ndandidla ngokuba noncumo xa ndithetha nabo. Bebecinga ukuba ndibancwasile. ”—UTabitha
Ukuba ubunguTabitha, ubuza kwenza ntoni? Yaye ngoba?
Yintoni enokwenza umntu okuhluphayo ngokwesini acinge ukuba umncwasile?
IBALI LOKWENYANI 2:
“ Yonke le nto yaqala ngeziqhulo ezithetha ngamanyala kunye nabanye abafana endifunda nabo. Ekuqaleni ndandingazihoyi izinto ababezithetha kodwa zaya ziqatsela. Emva koko baqalisa ukuhlala ecaleni kwam baze bandigone, kodwa ndandibatyhalela kude. Sekunjalo abazange bandiyeke. Ekugqibeleni omnye wabo wandinika iphetshane abhale kulo izinto ezithetha ngamanyala. Ndalinika utitshala, waza lo mfana wagxothwa esikolweni. Ndaqonda ukuba ngendandiye kutitshala kwasekuqaleni! ”—USabina.
Ucinga ukuba kutheni uSabina engazange aye kutitshala wakhe kwasekuqaleni? Ucinga ukuba wenza isigqibo esihle? Kutheni ucinga njalo, okanye kutheni ungavumelani noko?
IBALI LOKWENYANI 3:
“ Umninawa wam uGreg wayesendlwini yangasese, kwaza kwafika omnye umfana kuye wathi ‘Ndiphuze.’ Nangona uGreg wayengavumi, lo mfana wayengayeki ukusondela kuye. Kwanyanzeleka ukuba uGreg amtyhale. ”—USuzanne.
Ucinga ukuba uGreg wahlutshwa ngokwesini? Kutheni usitsho okanye kutheni ungavumelani noko?
Ucinga ukuba siyintoni isizathu sokuba abanye abafana bengaxeli xa abanye baye babenzela izimbo ezibonisa ukuba bafuna ukulala nabo?
Ucinga ukuba uGreg wenza isigqibo esihle kule ngxaki ebekuyo? Yintoni wena obuya kuyenza?
“Kwisikolo samabanga aphakathi, abafana babedla ngokutsala umva webra yam baze bathethe izinto ezingamanyala—njengokuthi bendingaziva ngcono xa ndinokulala nabo.”—UCoretta.
Ucinga ukuba aba bafana bebesenzani
C Babesenza izimbo ezibonisa ukuba bafuna ukulala naye?
“Omnye umfana endandikhwele naye ibhasi waqalisa ukuthetha izinto ezingcolileyo kum waza wandibamba. Ndabetha eso sandla ndaza ndamxelel’ ukuba ohlukane nam. Wandijonga ngathi ndiligeza.”—UCandice.
Ucinga ukuba lo mfana wayesenzani kuCandice?
C Wayesenza izimbo ezibonisa ukuba ufuna ukulala naye?
“Kulo nyaka uphelileyo kwakukho umfana owayemane endixelela ukuba uyandithanda kwaye ufuna ukundikhupha, nangona ndandisoloko ndimxelela ukuba andinamdla. Ngamanye amaxesha wayede andiphulule engalweni. Ndandimxelela ukuba makandiyeke, kodwa angavumi. Enye into awayenzayo kukundibhantsa ezimpundu xa ndisabopha imitya yezihlangu.”—UBethany.
Ucinga ukuba wayesenzani lo mfana:
C Wayesenza izimbo ezibonisa ukuba bafuna ukulala naye?
Eyona mpendulo ichanileyo kuyo yonke le mibuzo ngu C.
Yintoni eyenza izimbo ezibonisa ukuba ufuna ukulala nomnye umntu zohluke ekuncwaseni nasekuntlonteni? UEve uthi: “ Ngumntu owenza ezi zimbo owonwabayo ngoxa ohlutshwayo esiva ubuhlungu. Uyaqhubeka usiva ubuhlungu naxa umxelela lo ukuhluphayo ukuba akuyeke. ” Ukukhathazwa ngokwesini asiyonto emele ijongelwe phantsi. Akuchaphazeli nje izifundo zakho zesikolo kodwa kuchaphazela nempilo, kwaye okona kubuhlungu kungakhokhelela ekuxhatshazweni ngokwesini.
Funda okungakumbi: Funda isahluko 32, “Ndinokuzikhusela Njani Kubantu Abaxhaphaza Abantwana Ngokwesini?”
Oko Kuthethwa Ngoontanga Bakho Ngezimbo Ezibonisa Ukuba Umntu Ufuna Ukulala Nawe